R/W Kheyre oo xalay booqday Ciidamo loo qorsheeyay in ay dalka ka saaraan Al-shabaab. – Marqaanmedia24.com
March 18, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 0
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa xalay kormeeray Ciidamo gaar ah oo loo diyaariyey in ay fuliyaan howlgalo qorshaysan oo Al-shabaab looga saaraayo deegaanada dalka ay kaga sugan yihiin.
Ciidankaan oo lagu diyaariyey degmooyinka Dayniile iyo Hodan ee Gobolka Banaadir ayaa ka kooban Booliis iyo Nabad sugida kuwaa oo u diyaarsan howlgal lagu cirib tirayo kooxda Al-shabaab.
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali ayaa warbixin ku aadan diyaar garowga ciidanka waxa ka dhageystay Sarakiisha hogaaminaysa waxaa uuna uu muujiyey tageero isagoo ku hadlayey magaca Madaxwaynaha.
kormeerkaan uu Ra’iisul Wasaaraha xukumadda fedearalka Soomaaliya Xasan Cali khayre uu ku tagey xalay degmooyinka Hodan iyo Deyniile ayaa imaanaya xili daba yaaqadii todobaadkii tagay oo booqday nuucaan oo kala ah uu ku tagay degmada Hiliwaa ee Gobolkaan Banaadir.